Maitiro Ekuita Wiricheya Kuongorora Kunobatsira
Kana uri kufamba mutengesi uyo parizvino ari kunetsekana kuti awane purofiti, tinogona kukubatsira kuti uve simba mukati mekambani. Iri peji rakakumikidzwa kune ruzivo rwekuti ungakwidziridze sei bhizinesi rako remari paunenge uchiita wiricheya-kuongorora kuongororwa.
Iwe unofanirwa kukwanisa kugadzira kukura kwemari nekubhadharisa chakakodzera chishandiso kune wega mushandisi. Izvi chete zvine chekuita nezve rehab zvigadzirwa uye hazvitsanangure zvemari zvigadzirwa.
Kutanga, iwe unofanirwa kukwanisa kumisikidza HCSPC kodhi ayo anoshandiswa kufamba zvigaro uye ekurapa masevhisi. Iwe unofanirwa zvakare kuongorora iro repamutemo kusvika pari zvino zvinyorwa zvine chekudzoreredzwa zvinodiwa.
Kunzwisisa kuti yako nguva sePTA kana kufamba nyanzvi yakakosha, iwe unofanirwa kuziva kuti chiyero chei cherapi nguva kana zvasvika kune hurema.
Zvirongwa zvekudzidzisa inogona kuve nzira inoshanda yekubatanidza mukati me kufamba indasitiri; izvi zvinosanganisira musangano wekubatsira kudzidzisa vanhu nezve zvigaro uye nekupa ruzivo rwekufonera kuitira ramangwana.
Management uye Kudzidziswa kwe wiricheya Users
wiricheya manejimendi uye kudzidziswa kwakakosha kwazvo kune wiricheya vashandisi avo munguva pfupi yapfuura vaine rehab kana kurapwa. Imba manejimendi ye kufamba zvakare iri hama chinhu kana zvasvika pakudzidzisa vashandisi maitiro ekugara kwavo kufamba zvinoda.
Maminitsi gumi nemashanu ndiyo avhareji yenguva yaunofanirwa kunge uchishandisa nemushandisi kana zvasvika kune manejimendi uye makirasi ekudzidzisa. Rudzi urwu rwekudzidzisa runobatsira mushandisi kunzwisisa chidimbu chavo chemidziyo.
Mazano anogona kuuya anobatsira mushandisi, senge kuvaita nezve zviitiko zvinobatsira kusimudzira kuchengetedzeka, zvakajairika kufamba, uye kuendesa mukati nekubuda pachigaro chavo. Uyezve, vamwe varwere vangangoda makadzika-makirasi kuti vanzwisise avo wiricheya mukati nekunze.
Ruzivo rwakadai sekumiswa kwemuviri, wiricheya zvikamu uye zvishongedzo.